Posted by May Thu Khine at 10:48 PM No comments: Links to this post
မောင်ရေ... မောင်နဲ့ကျွန်မ ဆက်ဆံရေးက ဘာလဲကွယ်။
“မောင်.... နင်ဘယ်ဆီမှာ ရောက်နေလဲ ဆိုတာကို ဘယ်သူမှလဲ ငါ့ကို မသိစေချင်ကြဘူး။ နင်ဟာလဲ ငါ့အပေါ် စကတည်းက မချစ်ခဲ့ပဲနဲ့ ဒီလိုမျိုး မလုပ်သွားသင့်ပါဘူးဟာ။”
သူမ ဘာလုပ်ရမလဲ... သူမ ငိုဖို့လဲ မေ့လျော့နေတယ်။ သူမ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလဲ သူမ မမြင်ပါ။ သူမ ရင်ကို နာကျင်စေတဲ့၊ သူမ အသည်းနှလုံးကို တစစီ ဆွဲဆုတ်သလို ခံစားစေတဲ့ မြင်လိုက်ရတဲ့ မောင့်ပုံရိပ်ကိုသာ သူမ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကို ငေးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီခဏ၊ တကယ့်မှ ခဏလေးပါပဲ...မောင့်ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်သက် မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ခဏ မောင့်မေမေရဲ့ ငိုကြွေးသံ၊ သူမကို မြင်လိုက်လို့ပြောတဲ့ မောင့်မေမေရဲ့ စကားသံတွေ သူမနားထဲ စီရီရီ ဝင်လာတယ်။
မောင်.... ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ။
မောင့်မေမေရဲ့ စကားတွေက ကြားတချက် မကြားတချက်...
“သမီးလေး သတိထားပါ။ သမီးရေ... ငိုချင်ရင် ငိုလိုက်နော်...”
“သူ့မှာ သွေးကင်ဆာဖြစ်မှန်း သိတဲ့အချိန်က စလို့ သမီး သူ့အနားမှာ နေလို့ နစ်မွန်းမဲ့ အချိန်တွေ၊ ဘာမှ မလုပ်နိုင်လို့ နာကျင်ရမဲ့အချိန်တွေကို သူ မမြင်ချင်ဘူးတဲ့ သမီးရေ... အဲဒါကြောင့် အန်တီတို့ တအိမ်လုံး သမီးကို မပြောပြပဲ မျိုသိပ်ခဲ့ရတာပါ... သမီးရေ”
သူမ ရင်တခုလုံး ဗြောင်းဆန် နုံးချိ ခံရခက်လိုက်တာ... မောင်ရေ... မောင် ဘယ်လောက်တောင် ခံစားခဲ့ရမလဲ။
သူမ မျက်စိရှေ့ က ဖြူဖတ်ဖြူရော်လေး အိပ်မောကျနေတဲ့ သူမရဲ့ မောင် ကို သူတို့ ခေါ်သွားကြတော့မယ်။ "ကျွန်မ အားရပါးရ ကြည့်ပါရစေဦး။ အားရပါးရ ငိုပါရစေဦး။ မောင့်ကို ခေါ်မသွားကြပါနဲ့ ။ ကျွန်မ တောင်းပန်ပါတယ်... မောင့်ကို ခေါ်မသွားကြပါနဲ့ ...
မောင့်ကို ခေါ်မသွားကြပါနဲ့ ..."
ရုပ်ရှင်၊ ပြဇာတ် တွေ ပြီးဆုံးရင် "ပြီးပါပြီ" ဆိုပြီး အပြီးသတ်ကြတယ်မောင်။
"ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်း၊ ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးသာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ ကျွန်မတို့ ဖာသာ ကျွန်မတို့ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပေါင်းဖက်ရလေသတည်းလို့ ပြီးဆုံးချင်တယ် မောင် ... ကျွန်မရဲ့ အတွေးက ကလေးဆန်တယ်လို့ မောင်ပြောမလား ... စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်လို့ ပြောမလား ... မပြောပါနဲ့ မောင် ... အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် လူတိုင်း ကလေးဆန်ခွင့် ရှိပါတယ် ... စိတ်ကူးယဉ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် မောင် ...
မောင်ဟာ ဒီလောကကြီးမှာ မရှိပေမဲ့ ကျွန်မ ဦးနှောက်ထဲမှာကော ၊ ကျွန်မ နှလုံးသားထဲမှာကော ညီညီ လို့ရင်းနှီးသူတွေ ခေါ်ကြတဲ့ ညီမင်းနောင် ဆိုတဲ့ ကျွန်မ ချစ်သူဟာ အမြဲတမ်းရှင်သန်နေမှာပါ။"
Posted by May Thu Khine at 7:54 PM No comments: Links to this post
ဒီရေ ဆိုတာ အတက်အကျရှိတယ်...
အတက်ရှိပြီး အကျရှိတယ်ဆိုတာ သဘာဝ တရားပေါ့...
သဘာဝတရားဆိုတာ အမြဲတမ်း အမှန်တရား...
အမြဲတမ်းမှန်တဲ့ အတွက် လက်ခံကြရတယ်။
ပြောင်းလဲမှု သဘာဝ တရားပေါ့...
တပါးသူကို ဘယ်အထိ ထိခိုက်မိပြီလဲ...
Posted by May Thu Khine at 11:09 AM No comments: Links to this post
ခု လက်ရှိအတွက် နင်ဟာ
Posted by May Thu Khine at 3:29 PM No comments: Links to this post
ဘေးပတ်ပတ်လည် အုတ်ချပ် တစ်ချပ်ချင်းစီ ပေါင်းစပ်ကာရံထားတဲ့ ဒီအခန်းလေးက ကိုယ့်ရဲ့ တကိုယ်ထဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အခန်း။ အိပ်ခန်းလဲ ဆိုနိုင်တယ်၊ ထမင်းစားခန်းလဲ ဆိုနိုင်သလို၊ စာကြည့်ခန်းလို့လဲ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ ဒီအခန်းထဲမှာ အလုံပိတ်ချောင်ပိတ်မိနေရင် တော်တော့ကို စက်ဆုပ်မုန်းတီးမိမယ်။ ခုတော့ ကျဉ်းကျပ်လာရင် ဖွင့်စရာ ပြတင်းပေါက် ရှိတယ်၊ လွတ်ထွက်သွားချင်ရင် တံခါးပေါက်ရှိတယ်။
ချုပ်ချယ်မှုကင်းတဲ့ ကိုယ့်ဘဝလေးက ကျေနပ်စရာအတိ။
တစ်ခုခုရေးချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် စာကြည့်စာပွဲမှာထိုင်၊ ရေးနေကျ စာအုပ်ကိုယူ၊ ရေးရမှာက စာအုပ်ရဲ့အစ စာမျက်နှာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ရေးလာလိုက်တာ စာအုပ်က ထက်ဝက်ကျိုးပေါ့။
တချို့စာမျက်နှာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ တနေ့တာ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို ရေးထားတယ်။
တချို့မှာတော့ ကိုယ် ဘယ်သူနဲ့ ဆုံခဲ့သလဲ... ဘာတွေ ဗဟုသုတ သူတို့ဆီက ရခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေ စိတ်ထဲ အခန့်မသင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာတွေ ရေးမှတ်ထားတယ်။
ကိုယ်ဆုံခဲ့တဲ့ တချို့က စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝကြသလို၊ စိတ်သဘောထား အမြင်သေးသိမ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ သူတွေလဲ ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ထပ်ဆုံစည်းသလို၊ ထပ်လဲ မတွေ့ဖြစ်တော့တဲ့ သူတွေလဲ ဒုနဲ့ ဒေးပေါ့။
တချို့စာမျက်နှာမှာတော့ ကိုယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေရှိတယ်၊ ဝမ်းနည်းတဲ့ အချိန်တွေရှိတယ်၊ လွမ်းမောတသတဲ့အချိန်တွေ ရှိတယ်၊ မိဘကျေးဇူးဆပ်ချင်တဲ့ အချိန်တွေရှိတယ်။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကို သူ့ကို ရင်ဖွင့်ထားတယ်။
တကယ်တော့ ဒီစာအုပ်လေးက ကိုယ့်စိတ်၊ ကိုယ့်ဘဝကို အသိဆုံးသော သက်မဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး တစ်ခုပါပဲ။
ဘယ်လောက်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ လက်တွဲဖော် ဖြစ်ဖြစ် တခါတလေ သူတို့နဲ့ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အချိန်ဆိုတာ ရှိတာပဲလေ။ တကယ်တော့ ဒီမြေဇာပင် စာအုပ်ကလေးက ကိုယ်ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်၊ ငိုတဲ့အချိန်၊ ပျော်တဲ့အချိန်တွေမှာ မညည်းမညူပဲ သူ့ရင်ကိုဖွင့်ပြီး ကိုယ့်စကားတွေကိုနားထောင်ပေးခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ ဖြစ်ပြီးသမျှ ရေးမှတ်သမျှ ကိုယ့်ဘဝ စိတ်အထွေထွေကို ကိုယ်မြင်နိုင်ပြန်တယ်၊ ကိုယ့်အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်ရှိပြန်တယ်။
ဒီနေ့တော့ ကိုယ့်မှာ သူ့ကို ပြောစရာတွေ ရှိနေတယ်။
သူဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေး အကြောင်းကို ပြောပြချင်တယ်။
ကိုယ်က ကိုယ့်အကြောင်းပဲ တောက်လျှောက်ပြောလာတာ၊ ဒီနေ့တော့ ကိုယ့်အပေါ် အနွံအတာခံတဲ့ သူ့အကြောင်းကိုပဲ သူ့ရင်မှာ ကိုယ်တလုံးချင်း ရေးမှတ်ချင်တယ်။
“မင်းသာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အဖော်မွန်၊ မင်းရှိနေလို့သာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့မမြဲခြင်းတွေ ကိုယ်မျက်မြင်မြင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ”
နောက်နေ့တွေလဲ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို နားထောင်ပေးပါဦးလို့ ဆိုပါရစေ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပွားလေးရေ။
Posted by May Thu Khine at 2:41 PM No comments: Links to this post
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ရုံနဲ့ ဒီကလေးမ ဘာများ စမ်းပြန်တာတုန်းလို့ တွေးထင်ဖွယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
တခြားမဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေး ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခပေါ်အခြေခံပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ စမ်းသပ်မှုပါ။
စလုံးက မိန်းကလေးတွေကို ကြည့်လိုက်။ တအားလှကြပါတယ်။ မျက်တောင်လေးများက မိုးထိအောင် ကော့ပြီးတော့။ လှရက်နိုင်လိုက်ကြပုံများ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့အလှက မျက်လုံးပေါ်တည်နေတယ်ဆိုသလိုပဲ။ မျက်တောင်လေးကကော့၊ မျက်လုံးကာချယ်တွေနဲ့ မျက်လုံးက ပေါ်လွင်ပြီး၊ တချက်အကြည့်ခံရရင်ကို မူးမေ့လဲမတတ်ပါပဲ။
အဲသလို သူများတွေ လှတယ်ဆိုတာ မြင်ရ၊ တွေ့ နေရပြန်လေတော့၊ အနှီ မိန်းကလေးတဦးဖြစ်တဲ့ မေသူဆိုသဟာလဲ မျက်ဝန်းလှလှ ပိုင်ချင်ပြန်တော့တယ်။ နဂိုမျက်လုံးက မှေးမှေး၊ မျက်ရစ်ကမရှိ၊ မျက်တောင်က မျက်ရစ်အောက်ထဲဝင်နေရှာတော့ မျက်တောင်က မကော့နိုင်၊ အဲသလောက် နုံချာတဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင် ဖြစ်တဲ့သူဆိုတော့ ခုခေတ်ကာလ တီထွင်သူတွေကို မတရားကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ခုခေတ်က အတုတွေလဲ များသကိုးး။ မျက်တောင်တုတော့တပ်မဟေ့လို့ စမ်းသပ်ချင်စိတ် တဖွားဖွား စိတ်ထဲ ရင့်သန်ခဲ့တာ အချိန်လွန်စွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။
သို့ ပေမဲ့ အနီးအနား ရှိတဲ့ ညီမ၊ အစ်ကိုတော်များ၏ တရစပ်ထိုးနှက်မှုကြောင့် အကောင်အထည်မပေါ်ဖြစ်ခဲ့လေသမျှ (သူတို့ ကွယ်ရာကျရင်တော့... ဟဲဟဲ အပီပဲ) ... ဂျန်းတင်း (Genting) ဆိုတဲ့ နယ်မြေကို တခြား ကျောင်းတက်ဖော် သူငယ်ချင်းများနဲ့ ခြေဦးလှည့်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့် စမ်းသပ်ဖို့ အခြေအနေပေးလို့ လာပါတော့တယ်။ ဟဲဟဲ...
ဂျန်းတင်းရောက်တယ် ဆိုတာနဲ့ ... ဟိုတယ်အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ Watson က မျက်တောင်တုကို မတန်မတရားဝယ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ သြော် လှချင်တဲ့ မိန်းကလေးဘဝ။ ကုန်ဦးပေါ့ဟေ။ အလွန်သနားစရာကောင်းပါတယ်။
"အို ဘာဖြစ်သတုန်း စမ်းသပ်တာ ဘယ်လိုဆိုတာ သိရတာပေါ့" လို့ ရဲဆေးတင် မျက်လုံးစုံပိတ် ဝယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဝယ်ပြီးသကာလ ဘုံကျောင်း (Chin Swee Cave Temple) ကို သွားလည်ပတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ကျိတ်တိုင်ပင်ထားတာက ဘုံကျောင်းမှာ နားနေတုန်းလေး မျက်တောင်တုတပ်မှာပါ။ ထိုကဲ့သို့ လဲ နေရာမရှောင် လှချင်ရှာကြပါတယ်... မိန်းကလေးများ ဘဝပါ။
သူငယ်ချင်းက မျက်တောင် တပ်ပေးရှာပါတယ်။ ပထမဆုံး ခံစားချက်... လုံးဝ သက်တောင့်သက်သာ မရှိပါ။ မျက်လုံးပေါ်မှာ တခုခု ကပ်နေသလိုလို... (တကယ်လဲ ကပ်ထားတာကိုးး)။ မျက်လုံးပေါ်တခုခု မိုးနေသလိုလို (တကယ်လဲ မျက်တောင်ကြီးက မိုးလို့... ရှည်လိုက်တဲ့ မျက်တောင်)။ မျက်လုံးက ကြည့်ရတာမကြည်သလိုလို။ ကိုယ်က မျက်လုံးသာမှေးတာ သူများကို မျက်လုံးလေး ပင့်ကာ ဝင့်ကာနဲ့ ကြည့်ချင်သား။ မျက်တောင်ကြီးလဲ တပ်ကော ဟတ်လားးမားးး မျက်လုံးကို ဝင့်ကာ ပင့်ကာ ကြည့်ဖို့ နေနေသာသာ။ နဂို အော်လဂျင်နယ်မျက်လုံးက နှစ်ခါပြန်မှေးသွားသလိုပဲ။
အဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချလိုက်ပါတော့တယ်။ RM25 ပေးဝယ်လာတဲ့ မျက်တောင်လဲ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ လုံးဝမတပ်ချင်တော့ပါ။ မေသူ့ လို လျှပ်ပြာ၊ ပြာလောင်ခတ်နေတဲ့ သူနဲ့ တော့ လုံးဝ အဆင်မပြေရေးချမပြေပါ။ နေရတာလဲ ကျဉ်းကျပ်၊ အမြင်က မကြည်မလင်၊ အခန့် မသင့် မျက်လုံးကို မေ့ပြီးသာ ပွတ်ကြည့် သွားပေရော့ပဲ ကော်ကပ်ထားတာကြီးက ရွဲပလဲ သွားလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်း။ အို ... တွေးရဲဘူး။
တစ်ခုတော့ ကောင်းသွားတာပေါ့လေ... အစ်ကိုတော်များ နားညည်းသက်သာသွားရှာကြတာပေါ့။ မေသူ့ မှာတော့ စမ်းသပ်ချင်သမျှ ပိုက်ဆံကုန်သွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ တခြားလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုပဲ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပါတော့မယ်လို့ သဓိဌာန်ချလိုက်ပါတော့တယ်။
ချစ်ညီမ၊ အစ်မများလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ရင် စမ်းကြည့်ကြပါ။ (ကိုယ်လဲ နောက်တခေါက်ထပ်စမ်းရင် ကောင်းးးမလားးး)
Posted by May Thu Khine at 5:12 PM3comments: Links to this post
Labels: အတွေ့ အကြုံ
အခု လောလောလတ်လတ် ကြိုက်နေတဲ့ သီချင်းပါ။ MTV က အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်ပုံ ကို ကြည့်ပြီးတော့ ပိုပြီးတောင် သီချင်းကို ချစ်မိတယ်။ အဆိုရှင်ကလဲ ချစ်စရာကောင်းတာကိုး။ I LOVE HER. :P
Is sorrow or regret
When you don’t let your feeling show
Did you look ‘em in the eye ; did they feel it
Busy people walkin’ by
But if you want love, it’s not that tough
It's easy again
Do welcome naturally
Horses are meant to run
And the sun must mean to shine above
And flowers are meant to bloom
Did you say out loud… oh
Because.....if you did Hun
Well then you lived some
And that feeling inside...
That's called Satisfied.
Posted by May Thu Khine at 8:37 PM No comments: Links to this post